Somaliya: Shirkii Hoybo Oo Lasoo Gabogabeeyey Iyo Qodobbada Kasoo Baxay - Jigjiga Online
HomeSomalidaSomaliya: Shirkii Hoybo Oo Lasoo Gabogabeeyey Iyo Qodobbada Kasoo Baxay
Somaliya: Shirkii Hoybo Oo Lasoo Gabogabeeyey Iyo Qodobbada Kasoo Baxay
Magaalada Hobyo ee gobolka Mudug waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir uga socday muddo laba bilood ku dhawaad ah mid ka mid ah beelaha dega dowlad goboleedka Galmudug.
Shirkaas waxa lagaga wadahadalayey nabadaynta beesha dhexdeeda iyo nabad kula noolaanshaha beelaha kale ee dariska la ah.
Shirkan ayaa yimid iyadoo uu socdo muran siyaasadeed oo ku aadan dhismaha maamul gobleedka Galmudug. Magaalada Dhusamareeb ayaa waxaa lagu waday in malaintii Arbacada ahayd uu ka furmo shir dib u heshiisiineed, balse shirkaasi oo ay dowladda federaalka gadaal ka riixeysay ayaa dib loo dhigay sababa lagu sheegay farsamo.
Ka qeybgalayaasha shirka Hobyo ayaa horay u dalbaday in shirkaasi dib loo dhigo.
Shirka Hobyo waxaa lagu dhisay gole ka kooban 68 xubnood oo shaqadiisu tahay hogaaminta beesha iyo ka shaqaynta nabadaynta beesha dhexdeeda iyo beelaha kale ee dariska la ah.
Golahan waxaa guddoomiyihiisa loo doortay borofisoor, Cabdiqaadir Maxamad Shirwac, oo tartan la galay Janaraal Maxamad Nuur Galaal.
Cabdiqaadir Maxamad Shirwac, oo BBC-da u waramay ayaa sheegay in shaqada xilka loo doortay tahay ” ku hogaaminta barnaamijkaa isaga ah, oo xag dhaqaale, xag siyaasadeed iyo xaq dhaqan iyo xag garsoor intaba leh.”
Shirwac oo la weydiiyey bal hadda inuu qeexo xilkani waxa uu yahay, maadaama uu yahay wax ku cusub hanaanka hogaan dhaqameedka ee ay beelaha Soomaalidu lahaan jireen, ayaa waxa uu ku jawaabay ” waa ka guurkii miyiga ee magaalo la yimid, habdhaqankaas oo u baahan ku abtirsasho dhaqan magaalooyinka loo guuray ah.”
Borofesoor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac waxa kale oo uu iftiimiyey in ay wax ka jiraan hadal haynta ah in golahaa cusub hawlaha uu qaban doono ay ka mid yihiin in uu kala saari doono siyaasiyiinta beeshaa ka dhashay ee damacsan in ay isu sharaxaan oo xilal ka qabtaan xukuumadaha heer maamul goboleed iyo mid federaal ba.
Brofisoor Shirwac oo arintaa faahfaahinayaana waxa uu yidhi ” hawsha goluhu way sahlaysaa in dadku is bartaan, oo golahaasi ka talo bixiyo dadka u qalma hadii ay siyaasiyiin yihiin iyo hadday dhaqaaleyahan yihiin iyo hadday dhaqanyahan yihiin ba iyo hadii ay garsoore yihiin ba ummada u garsooraysa oo ay talo urursan ku talo bixiyaan wixii Soomaali mustaqbalka wax taraya.”
Hadba shirkaa beesha uga socday magaalada Hobyo ee maanta soo gabogaboobay ayaa waxa ka soo baxay war-murtiyeed lagu faahfaahinayey ujeedooyinkii shirkaas iyo go’aannadii lagu gaadhayna waxay u dhignaayeen sidatan:
1. Golaha Hoggaaminta
Golaha Hogaaminta Beesha Habargidir (GHHG) waa gole ay ku midaysan yihiin Beelaha Habargidir, una matalaya fagaarayaasha guud, waxaana si wadajir ah magaca iyo mas’uuliyadda dhanka dhaqanka, siyaasadda, horumarinta bulshada ku hadli kara GHHG ee lagu doortay shirweynaha HG
2. Munaasabadda caleemo-saarka
Caleemo-saarka Golaha Hoggaaminta Beesha Habargidir waxaa la qaban doonaa dhammaystirka dhismaha gudiyada golaha kadib. Munaasabaddaas waxaa lagu casuumi doonaa madax-dhaqameedyada beelaha Soomaaliyeed iyo martisharaf kala duwan. Xafladda caleemo-saarka waxay dhaceysaa Sabti, 26/10/2019; waxayna ka dhacaysaa caasimadda Soomaaliya, Muqdisho.
JIGJIGA: Masuuliyiintii Jibriga Oo Xabsiga Loo Taxaabay Iyo Waxa Laga Ogyahay Ganacsato Ay Wada-shaqaysan Jireen
Maraykanka oo malaayiin doolar u ballan qaaday kabtan wada Markab ay Iiraan leedahay